Dhamaan Rakaabka Diyaardii Itoobiya ee burburtay oo geeriyooday.(Faafaahin rasmi ah) – Shabakadda Amiirnuur
March 10, 2019 6:26 pm by admin Views: 54
Waxaa la xaqiijiyay geerida inkabadan 100 ruux oo saarnaa diyaaradda ay leedahay Itoobiya oo maanta burburtay, kadib markii ay ka duushey garoonka diyaaradaha ee magaalada caasimadda ah ee Adis-Ababa.
War kasoo baxay shirkadda diyaaradaha ee Ethiopian Airline ayaa lagu xaqiijiyay dhimashada 157 ruux oo saarnaa diyaaradda Boing 737, taas oo saacadu markay ahayd 08:30am subaxnimo ka duushey garoonka diyaaradaha Bole International Airport ee magaalada Adis Ababa.
Lix daqiiqo kadib markii ay duushey diyaaradda ayaa laga waayay raadaarka lagala socdo dhaq-dhaqaaqa diyaaradaha, waxaana la ogaaday iney ku burburtay meel u dhow magaalo lagu magacaabo Bihoftu oo 50Km kaga beegan koonfurta magaalada Adis Ababa.
Dadka diyaaradda burburtay saarnaa ayaa kasoo kala jeeda wadamo badan oo katirsan caalamka, waxaana inta la ogaaday ay kala yihiin 32 Kenyan ah, 18 Canadian ah, 9 qof oo Itoobiyaan ah, 8 Chinese ah, 8 qof oo Ameericaan ah, iyo 7 ruux oo Brtish ah.
Diyaaradda Ithiopian Airline waxay xaqiijisay in 4 ruux oo kamid ah dadka saarnaa diyaaradda ay wateen bassboro dibulmaasi ah oo ay bixiso Qaramada Midoobay, waxayna sheegtay ineysan ogeyn dalalka dhalasho ahaan ay kasoo jeedaan.
Xafiiska ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abey Axmed ayaa ka tacsiyeeyay geerida dadkan faraha badan, wuxuuna sheegay inuu tacsi u dirayo ehellada iyo saaxiibada dadka geeriyooday.
“Waxaan tacsi dhab ah la wadaageynaa saaxiibada waayay dadkooda” ayaa lagu yiri qoraal lagu baahiyay barta twitterka ee xafiiska Ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abey Axmed.
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyata oo ay dad badan kaga dhinteen diyaaradda burburtay ayaa isagana wuxuu qoraal tacsi ah ku baahiyay bartiisa twitterka, kaas oo uu ku sheegay inuu murugada kula qeybsanayo dadka Kenyaatiga ee ehelladooda ku waayay burburka diyaaradan.
Shirkadda diyaaradaha Itoobiya waxay sheegtay in goobta ay diyaaradda ku bubrutay u dirtay khubaro iyo shaqaale katirsan gumadka deg dega ah, kuwaas oo ay sheegtay iney dowladda ka saacidi doonaan wax weliba oo la xiriira burburka diyaaradda.
Xog la helayo waxay sheegeysaa in qaar kamid ah dibulmaasiyiinta reer-galbeedka ee saarnaa diyaaradda Itoobiya ay doonayeen in Nairoobi kaga qeybgaleen kulan beri furmaya oo ay soo qaban qaabisay Qaramada Midoobay.
Diyaaraddan burburtay oo nooceedu yahay Boeing 737 ayaa lamid ah diyaaraddii laga lahaa dalka Indonesia, taas oo sanadkii 2018 ku burburtay meel u dhow magaalada caasimadda ah ee Jakarta kuna dhinteen ugu yaraan 189 ruux.
Madaxda shirkadda farsameysa diyaaradan oo burburkeedu soo laa laabtay ayaa sheegay iney wadaan baaritaanno ay ku ogaanayaan waxa rasmiga ah ee keenay burburka, balse waxay ku andacoodeen in diyaaradooda aysan ku ogayn wax cillad ah.